Masar Oo Dannaynaysa Maxkamadaynta Nin U Dhashay Oo Gabadh Uu Dhalay Ku Dilay Jarmalka | Hangool News
Masar Oo Dannaynaysa Maxkamadaynta Nin U Dhashay Oo Gabadh Uu Dhalay Ku Dilay Jarmalka
Dawladda Masar ayaa waxay fara galisay dacwada ka dhanka ah Aabo u dhashay Dalkaasi oo gabadhii uu dhalay qudha kaga jaray Dalka Germany, kadib markii hooyadeed iska khilaafeen teleefanka, fara galinta xukuumadda Masar ayaa waxay timid markii Qoyska Aabahaasi oo la yidhaahdo Axmed Fu’aad Mascuud ka codsadeen inay Dacwadaasi ka caawiso xukuumadda Masar.
Safiirada isla markaana ah Wasiirada Hijrada ee Dalkaasi Masar Nabiila Makram ayaa waxay sheegtay inay wasaaradeed ka jawaabtay codsiga ka soo yeedhay Qoyska uu Aabahaasi ka soo jeedo waxa aanay sheegtay inay bilaabeen sidii ay ogaan lahaayeen xaqiiqada dhabta ah ee dacwadaasi.
Aabahan Axmed Fu’aad ayaa xaaskiisa waxay is khilaafeen ayaa waxay is guursadeen muddo 10 sano ah ka hor waxaanay xaaskiisu ka soo jeedaa Dalka Poland waxa aanay is barteen xilli ay dalxiis ku timid Dalka Masar, gaar ahaana Goobta Dalxiiska ee Uqsur waxaana dhex maray qiso jaceyl dhab ah oo sababtay inay isguursadaan.
Intaasi kadibna waxay u safreen Dalka Germany si ay halkaasi u degaan isla markaana ay ka shaqeystaan, Xaaska Axmed oo magaceeda la yidhaahdo Katrina ayaa waxay da’da ka weyn tahay Saygeeda 12 sanadood.
Dadka la deriska ah Axmed ayaa waxay shabakada Wararka Al-arabia oo Wargeyska Himilo kasoo xigtay ay sheegeen in Axmed iyo xaaskiisa Katrina ay nolol aad u wanaagsan ku wada noolaayeen, balse maalmo keliya ka hor inta aan la shaacin dilka gabadhiisa yar uu u geystay uu soo kala dhex galay khilaaf yar oo aan badnayn.
Dhinaca kale, Qoyska uu ka soo jeedo Axmed ayaa waxay sheegeen in dacwadaasi tahay waxba kama jiraan sababtuna ay tahay in Wiilkoodu oo aad u jeclaa gabadha uu dhalay oo magaceeda la odhan jiray Saara, sidaasi awgeedna waxay Xukuumada Masar ka codsadeen inay ka gun gaadho xaqiiqada